Qalabka Jimicsiga Jimicsiga, Mashiinka Treadmill, Qalabka jimicsiga gacmaha - Baisheng
"Dad-ku-saleysan" waa aasaaska dhaqankeena shirkadeed. "Faa'iido isweydaarsiga, hal abuur cusub, ixtiraamka aadanaha iyo hawlgal joogto ah" ayaa ah mabda'ayada ganacsiga. Waxaan horumarin doonaa hal-abuurnimada iyo ruuxa dhabta ah, waxaanan ku soo saareynaa alaabada ugu fiican oo leh aaladda heerka koowaad.
Hip Afduubka Hip Afka BS-D48
0 Mashiinka Saxaafadda Digriiga ah
Baaskiil gudaha ah BS-6521
XUZHOU BAISHENG SPORTS CO., LTD kaasoo ku takhasusay cilmi baarista iyo soo saarista qalabka jimicsiga. BS SPORTS waxay wadar ahaan gashaa 3 Milyan oo Doollar, oo daboolaya dhul dhul ah in kabadan 10000 mitir oo laba jibbaaran.
BS SPORTS baaxadda meheradda waxay dabooshaa R&D, Soosaarka, Iibka iyo iibka ka dib ee qalabka jimicsiga ganacsiga, goobta jimicsiga guryaha iyo alaabada la xiriirta.Over 70% alaabada waxaa laga iibiyaa Woqooyiga Amerika, Bariga Yurub, Bariga Dhexe, Taiwan, ongKong iwm.
Habeynta qolka jimicsiga ee saxda ah micnaheedu waa inaadan u baahnayn inaad iska bixiso lacagta xubinnimada jirdhiska ama tababaraha shaqsiyeed. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa qalabka saxda ah ee jimicsiga. Qalabyada aad dooratayna way kala duwanaan doonaan iyadoo ku xiran heerkaaga jimicsiga iyo yoolalkaaga jimicsiga. Iskuday inaad miisaanka lumiso? Waxaa laga yaabaa inaad doorbido inaad kalooriyada ku gubto c ...
Showga Ciyaaraha Shiinaha
XUZHOU BAISHENG SPORTS CO., LTD wuxuu tegayaa magaalada Shanghai ee dalka Shiinaha bisha May, sanadka 2020 wuxuuna kaloo ka qeybgali doonaa bandhigyo shisheeye sida Vietnam, India iwm.